ग्राहकका कस्ता कस्ता माग ? यौनकर्मी महिला पनि छक्क पर्छन् « Postpati – News For All
ग्राहकका कस्ता कस्ता माग ? यौनकर्मी महिला पनि छक्क पर्छन्
वास्तवमा यौनकर्मी महिलाहरु दैनिक रुपमा नयाँ नयाँ खतराको सामना गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई कस्ता कस्ता खतरा आइपर्दछन् त ? यसको अनुमान लगाउन पनि गाह्रो पर्छ । वेश्यालयमा कस्ता कस्ता ग्राहक आउँछन् र उनीहरुका माग कस्ता हुन्छन् ? पढौँ केही अनौठा तथ्यहरुः
– विश्वको कुनै एक चर्चित वेश्यालयमा एकजना ग्राहक प्रायः आउने गर्दाे रहेछ । उसले यौनकर्मी महिलासँग सेक्स गर्नुको साटो महिलालाई एउटा गिलासमा पिसाब फेर्न लगाउँदो रहेछ र त्यसबापत झण्डै २० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दिँदो रहेछ ।
– एकजना महिला यौनकर्मीका अनुसार एकजना यस्तो ग्राहक उनीसँग आयो जसले सेक्स होइन की नक्कली बन्दुकले लडाइँ गर्ने प्रस्ताव राख्यो । त्यसपछि नक्कली बन्दुक समातेर फायर गर्दै केहीबेर ऊसँग लड्नु पर्दथ्यो । त्यसक्रममा उसले तथानाम गाली पनि गर्दथ्यो ।
-एकजना ग्राहक यस्तो पनि रहेछ की उसले यौनकर्मी महिलालाई आफ्नो आमा बन्न आग्रह गर्यो । यौनक्रिडा गर्ने कोठामा एकछिन उसको लागि आमाको अभिनय गरिदिनुपर्ने । अनि ऊ बच्चाजस्तै गरी कोठामा उफ्रिने र रोइकराई गर्ने गर्दथ्यो ।
-कतिपय ग्राहक यस्ता अनौठो पनि हुन्छन् की यौनकर्मी महिलाको निर्वस्त्र सरीरमा खानेकुरा राखेर खान पाउनुपर्ने माग गर्दछन् । त्यस्तै एकजना ग्राहकले एक यौनकर्मी महिलाको निर्वस्त्र सरीरभरी चिल्ली सस लगाइदिएको घटना बाहिर आएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा